Na dia Misy aza ny Fanoherana, Mbola Miasa Hanangana Tohodrano Goavana Mety Hamindrana Toerana ireo Teratany 20.000 i Malayzia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Mey 2015 3:19 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, Türkçe, Deutsch, Français, Nederlands, русский, čeština , 日本語, English
Jery an'i Baram, Sarawak, izay ho tratran'ilay tetikasanètohodrano. Sary avy amin'i Jettie Word, famoahan-tsary nahazoana alalana
Hanangana tohodrano iray goavana ny fiadidiam-pintantanana an-toerana ao Sarawak ao Malayzia na dia manohitra izany amin'ny heriny manontolo aza ny mponina sy ny vazimba teratany izay ho tratran'ny fiantraikan'ilay tetikasa. Sarawak dia ao anatin'ny nosy Borneo, izay malaza amin'ny fananana harena voajanahary ao aminy.
Ny volavolam-panorenana tohodrano ao Baram, miorina ao amin'ny faritra avaratr'i Sarawak, dia antenaina hiteraka angovon'aratra 1 200 megawatts, saingy maro no manahy fa hanafotra ala 412 km² izany. Ankoatra izany, dia vahoaka tokotokony ho 20.000 avy amin'ny tobim-ponenan'ny vondrona vazimba teratany Kayan, Kenyah ary Penan no tsy maintsy afindra toerana mandritra ny fananganana ny tohodrano. Ny tohodranon'i Baram no iray amin'ireo tohodrano goavana 12 kasain'ny governemantam-paritra aorina ao Sarawak.
Peter N. J. Kallang, mpitarika iray manohitra ny fananganana ny tohodrano, nampitandrina fa hamafa ny fototry ny vondrom-bahoaka teratany ao Baram ny fananganana ny tohodrano:
Natsangana ho tombontsoan'ny hafa izy io fa tsy ho amin'ny tombontsoan'ireo monina ao Baram ary rahatrizay any aoriana be any vao ho fananan'i Baram.
Amin'ny maha-lasibatra ahy dia tsy azoko ity zavatra tsy rariny, mahatezitra ary mihoam-pampana ity. Tahaka ny fitrandrahana atao tsy amim-pisainana izay entin'ny fitiavantena miaraka amin'ny fahavetavetana ilay izy voalohany indrindra. Ho anay izay tratra mivantana dia tsy misy afa-manameloka anay hieritreritra fa fika voarefy sy niniana ary araraotana handringanana ny fokonay izy io.
Efa hatramin'ny herintaona izao ny mponina ao an-toerana no nametraka barazy hisorohana ny fananganana ny tohodrano. Efa niantso ny vondrom-piarahamonina hafa ao Malayzia sy ireo tambajotram-piarovana ny tontolo iainana avy amin'ny lafivalon'ny planeta ihany koa izy ireo hanohana ny fanentanana ataon'izy ireo amin'ny fanoherana ny fananganana ny tohodrano.
Hetsika fanoherana ny tetikasam-pananganana ny tohodranon'i Baram. Saripika avy amin'ny pejy Facebook-n'ny Save Rivers
Barazy natsangan'ny mponina ao an-toerana hampitsaharana ny fananganana tohodrano. Saripika avy amin'ny pejy Facebook Save Rivers
Diabe fanoherana ny tetikasan-tohodranon'i Baram. Saripika avy amin'ny Sarawak Report
Mitohy ny barazim-panoherana ao Baram. Saripika avy amin'i Jettie Word, nahazoana alalana.
Tamin'ny herinandro teo, nandritra ny andro faha-555 nitarihan'ny fiarahamonina ny sakana fanoherana ny tohodranon'i Baram, dia nisy lahatsarim-panadihadiana iray navoakan'ny The Borneo Project izay manazava ny tsy mahazava-dehibe ny tetikasam-pananganana ny tohodrano ao Sarawak sady tsy ahazoan'ny mponina ao an-toerana tombontsoa amin'izany. Mitsapa ihany koa ny filma raha singa iray lehibe nahatonga ny fananganana tetikasan-tohodrano ny kolikoly.